China High nkenke omenala CNC machining aluminum akụkụ metal igwe akụkụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndị na-emepụta | Weldo
High nkenke omenala cnc machining aluminum akụkụ metal igwe akụkụ
Aluminom bụ ihe dị fechaa, na-enweghị magnetik, ọla ọcha na-acha ọla edo nwere ike ịme ka ọ bụrụ ụdị ọ bụla. Enwere ike ịgbanye ya n'ime nnukwu efere maka tankị ndị eji ejiji ma ọ bụ mpempe akwụkwọ maka mpempe akwụkwọ. Enwere ike ịdọrọ ya na waya ma mee ya na mkpọ.
Zitere anyị email ala ibu ka pdf
Cnc aluminom akụkụ, aluminom akụkụ ahụ mapụtara
Ihe na-emekarị esichara
Aluminom 6061，Aluminom 6063，Aluminom 6061-T6, Aluminom 6063-T5, Aluminium 7075, Aluminom 7075-T6, Aluminom 6083, Aluminom 2011,
Aluminom 2017, Aluminom 2024,
Aluminom 5083, wdg
Zinc / nickel / chrome plating, kpaliri ọkụ, eserese,
uzuzu mkpuchi, Anodize Oxidation, ma ọ bụ na agba: dị ka ọlaọcha, acha anụnụ anụnụ, ọbara ọbara, wdg plating, ọlaọcha-plated, Gold-plated, wdg polishing, electrolytic polishing, mikpuru na-enweghị ọkụ eletrik nickel na na.
CNC machining, CNC mbịne, gringding, mkpọpu ala, W / C…
Oke Size nwere ike hazie
3: Machining (CNC machining center, CNC lathe, igwe, mbịne, egweri, W / C, mkpọpu ala, ịme ọpịpị…)
5: Elu imecha
100% nyocha tupu mbufe maka nlele, nlele nlele dị ka ihe ndị ahịa chọrọ maka imepụta ihe.
Anyị ọkọlọtọ mbukota: ngwaahịa ọbọp na afụ, ma ọ bụ na 1 mpempe / eyi akpa, mgbe ahụ na osisi igbe ma ọ bụ akwụkwọ katuunu. A na-ezipụ ọtụtụ n'ime ngwongwo Site na International Airway Express, DHL, Mbupu. Ọ Na - ewekarị Oge 7-10 Na - arụ Ọrụ (orzọ Door Door) Anyị nwekwara ike ịhazi mbupu Via Sea Way.
Ọ bụrụ na ị natara ọ bụla erughị eru akụkụ, biko gosi anyị foto, mgbe anyị injinia na QC ngalaba ego, anyị ga-ahọrọ inyere gị aka ịrụzi ma ọ bụ redo n'ime 10 ~ 15 ụbọchị dị ka jụrụ quantities.
Mentkwụ ụgwọ okwu:
Enwere Nhọrọ 5 tokwụ thegwọ: Paypal, Western Union, T / T, Nyefee Bank (Dị ka OCBC) .Nhọrọ nke Kachasị Mma Maka Ar Na-edozi ya.
Nkwụnye ego 50%, na nkwụnye ụgwọ akwụ ụgwọ tupu mbufe.
1: 1Factory ozugbo, na ezi mma na ezi uche price.
2: maka nhazi: Anyị nwere ọgaranya ahụmahụ na nhazi ọtụtụ ụdị nke machining akụkụ na ọtụtụ iche iche nke ihe.
Jiri obi ụtọ nabata ọkọlọtọ, ọkọlọtọ, OEM, akụkụ akụkụ ahaziri iche.
Akụkụ nwere ike iji oke nkenke, ndidi nwere ike iru +0.005mm, Oke Roughness nwere ike iru Ra0.8-3.2
3: Maka ịgbakọta: Anyị nwere ọkachamara gbakọ ngalaba, n'ihi na anyị factory na-eme ka equipments, nwere ike na-enye gbakọta ọrụ maka gị.
anyị na-enyekwa otu nkwụsị maka ndị ahịa anyị. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị, anyị ga-anwa ike anyị niile inyere gị aka. Ọ bụrụ na ị nwere aro dị oke ọnụ ahịa, anyị ga-akpachara anya na-echebara ya echiche. Anyị agaghị egosị ndị ọzọ ihe osise eserese gị, Na Anyị Pụrụ Iche Siri NDA.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na Ngwaahịa anyị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị!
Nke gara aga: CNC ígwè Part
Osote: Metal machining center omenala-egwe ọka akụkụ CNC ationgha
Omume ndị ọrụ ndị ọrụ ahịa ji ezi obi na azịza ya bụ oge na nkọwa zuru oke, nke a na-enye aka maka nkwekọrịta anyị, daalụ.
Site na Honorio si Hongkong - 2017.11.01 17:04
Site na Octavia si Danish - 2018.11.06 10:04
Metal machining center omenala milling akụkụ CNC ...
Omenala Mere ricgha Aluminium CNC machining ...
Omenala Mere CNC machining / machined Aluminium Par ...
High nkenke Omenala Mere CNC machining / Machin ...
CNC Aluminium akụkụ / aluminum akụkụ ahụ mapụtara / aluminu ...